त्रिवेणी गाउँपालिकाले पाँच बर्षमा के गर्यो, के गरेन? | Himal Times
Home Flash News त्रिवेणी गाउँपालिकाले पाँच बर्षमा के गर्यो, के गरेन?
त्रिवेणी गाउँपालिकाले पाँच बर्षमा के गर्यो, के गरेन?
फोटोमा अध्यक्ष घर्ती र उपाध्यक्ष विष्ट
देशमा संघीयता लागु भएसंगै गाउँघरमा सिंहदरबारको परिकल्पना गरियो । तीनतहको सरकारमध्ये जनताको घरआगनको सरकार स्थानीयतह नै हो । देशभर ७ सय ५३ स्थानीयतहहरु छन् । जसमध्ये रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका पनि चर्चित स्थानीयतह हो भन्दा फरक नपर्ला । हामी हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानीयतहको निगरानी तथा खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।
आगामी वैशाख ३० मा स्थानीयतहको चुनाव हुदैछ । त्यसपछि नयाँ जनप्रतिनिधि सत्तामा आउने र पुरानाको बहिरगमन हुने तयारीसमेत हुदैछ । पहिलोपटक जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले गाउँमा के कस्तो प्रभाव र कार्य गरे भन्ने बारे केलाउन जरुरी छ ।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीको हकमा यहाँ १० वडाहरु छन् यहाँका अधिकांश वडा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हात पारेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती र उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खडका पनि माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएका थिए । यस्तैमा पालिकाको ७ नम्बर र १० नम्बर वडामात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ ।
त्रिवेणीको कुरा गर्दा जिल्लाकै प्रमुख प्रवेश द्धार भएकोले पनि यहाँ विकासमा केही हदसम्म सजिलो भएको देखिन्छ । तर यस्तै अन्य स्थानीयतह जस्तै यहाँ पनि जनताले सोचे अनुसार काम नभएको भन्ने गुनासा भने प्रसस्तै भेटिन्छन् । यद्यपि सरकार प्रति धेरै गुनासाहरु रहेपनि यहीँ नै प्रमुख समस्या हो, जनप्रतिनिधिले यस्तो गल्ती गरे, यो गर्नुपर्ने थियो, भनेर कसैले ताकेता तथा दबाब सिर्जना गर्ने गरेको खासै देखिदैन ।
गाउँपालिकाभरी यो पाँच वर्षमा साना ठुला गरेर हजारौं आयोजनाको काम भएको देखिन्छ । जसमध्ये दुई दर्जन ठुलो आयोजना पनि सञ्चालन तथा निर्माणको क्रममा रहेका छन् । ती सबै आयोजनामा लाख, करोड हैन अर्बबढीको लगानी सरकारले गरेको छ ।
संघीयता अघि एउटा गाविसमा मुस्किलले १० लाख बजेट आउनेमा बर्षेपनि करोडौं बजेट गाउँमा आउनु संघीयताको प्रमुख सकरात्मकपक्ष हो । तर उक्त बजेट सही सदुपयोग नभएर दुरुपयोग बढ्नु पनि अर्को बिडम्बना मात्रै नभएर महामारी रोग पनि हो । बजेट दुरुपयोग रोक्नु आम जनताको कर्तव्य हो । ताकि समाजिक सञ्जाल तथा चिया गफमा मात्रै बिरोध गर्नु ठिक हैन ।
सामान्य किसान परिवारमा जन्मेर जनयुद्धहुदै स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्म आइपुगेका गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद घर्ती मगर र सामान्य किसान परिवारमै जन्मेर जनयुद्ध जस्तो आन्दोलनमा लागेर श्रीमानसमेत गुमाएकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खडकाले अब जेठमा सत्ता छोड्नुपर्ने छ । उनीहरूले सत्तामा रहदा थुप्रै काम गरे होलान् कति जनताबाट रुचाईयो, कति रुचाईएन भनेर लेखाजोखा गरेर हिसाब गर्न नसकिएला तर समग्रमा केही सकरात्मक, नकारात्मक कुराहरू भने पक्कै जनता माथि स्थापित छन् । सोही अनुसार स्थानीयहरुले आ-आफ्नो मुल्यांकन गरेका होलान ।
केही समयअघि गाउँपालिका लेखापाल र हाकिमहरुको गतिविधिहरुले नकारात्मक रुपमा चर्चामा आएको गाउँपालिका पछिल्लोपटक सुधारउन्मुख भने पक्कै देखिन्छ । पछिल्लोपटक गाउँपालिकाको प्रशासनीक कार्य सम्हालेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश पुनको कार्यकालमा खासै त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणीहरु सतहमा नआएपनि स्थानीय सरकार प्रति गुनासा भने निरन्तर रहेको पाईएको छ ।
रमेश पुन अघि तीन जना शाखा अधिकृतहरुले प्रशासनिक काम सम्हालेपनि करिब डेढबर्षदेखि भने रमेश पुनले निमित्तको रुपमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर गएको चैत १४ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा प्रेम बहादुर घर्तीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । घर्तीका अनुसार निमित्तको रुपमा काम गरेका पुनले सकरात्मक काम गरेको प्रतिक्रिया आफुले पाएको बताए । साथै उनले स्वागत कार्यक्रमको अवसरमा आफुले जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेर गाउँपालिकालाई योगदान गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । उनको कार्यकाल भने कस्तो रहन्छ हेर्न बाँकी छ, शुभकामना ।
गाउँपालिका सरकारले गरेका केही काम तथा प्रतिक्रिया
— सबैभन्दा पहिला त सबै त्रिवेणी वासीको पायक पर्ने स्थान त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र खारानेटा सार्नु उचीत निर्णय मान्न सकिन्छ । साथै उक्त स्थानमा करिब ५४ रोपनी बढी जग्गा निशुल्क उपलब्ध हुनु खुसीको कुरा हो । गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीका अनुसार सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र राख्दा पनि ठुलो संघर्ष गर्नुपरेको उनी बताउछन । घर पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र राख्ने अवसर हुदा पनि र चौतर्फी दबाबकाबीच पनि जोखिम मोलेर सबैलाई पायक पर्ने स्वच्छ र सुन्दर स्थानमा केन्द्र राखेको उनी बताउँछन् ।
हाल कायम रहेको केन्द्र पालिकाको वीच डाडोमा रहेको छ । पालिका केन्द्रलाई प्रमुख सडक सञ्जालले छोएको छ भने , विद्युत, खानेपानीको व्यवस्थापन रहेको छ । पालिकाका सम्पुर्ण वडा तथा गाउँबस्तीहरु अवलोकन गर्नसक्नु उक्त स्थानको सुन्दर पक्ष हो । केन्द्रको हकमा खासै प्रतिक्रिया छैन ।
— त्रिवेणीको सबै जसो वडा तथा टोलहरुमा सडक सञ्जाल छ । त्यसमध्ये पनि राप्ती राजमार्ग गाउँपालिकाको बीच भएरै गएको छ । साथै गाउँपालिका भित्रका प्रमुख गाउँहरु सिम्रुतु- खुम्चेरी, खारानेटा-विता, सिम्रुतु-रुंघा,सिम्रुतु-गैरीनेटा, झुल्नेटा-नुवाकोट, पेउघा जिउला रोड कच्ची तथा गरावेल स्तरउन्नती हुनु राम्रो पक्ष हो । तर ती आयोजनाको पारदर्शीता तथा प्रभावकारितामा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।
–त्रिवेणीको करिब ९० प्रतिशत भूभागमा विद्युतको पहुँच पुर्याउनु गाउँपालिकाले पहल नेतृत्व लिनु ठीक हो । तर स्थानीय स्तरमा उत्पादन भैरहेका लघुजल बिद्युतलाई उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा प्रभावकारिता बनाउनु पर्थ्यो ।
— गाउँपालिकाले पालिका भित्रका सामाजिक विद्यालयहरुलाई पुर्णतः अनुदान उपलब्ध गराएको पाएको छ । जसले गर्दा विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठन सहज भएको छ । त्यस्तै पालिका भित्र उच्चमावि र क्याम्पस सञ्चालनमा रहनु, प्राविधिक विषय समेत पनि पढाई हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर गाउँपालिकाले उत्कृष्ट पठनपाठनका लागि शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्नु दुखद हो । स्मार्ट कार्यक्रम र सयन्त्रको आवश्यक छ ।
–गाउँपालिका स्थापना पछि त्रिवेणीमा पर्यटन पुर्वाधार बजेट पनि राम्रो आएको छ । पर्यटन पुर्वाधार अनुसार धुमभिर जनयुद्ध संग्राहलय आयोजना सञ्चालन निर्माणको चरणमा रहेको पाईएको । यसले समग्र त्रिवेणीको पर्यटनको भविष्य भने पक्कै बोकेको छ । तर यसलाई स्थानीय कृषि पर्यटन संग जोड्न जरुरी छ ।
— गाउँपालिका स्थापना पछि १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । उक्त अस्पतालले कोभिड नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेलेको थियो । अस्पतालमा थप सुबिधा विस्तार भैरहेको पाईएको छ । त्यस्तै पालिकाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्नु र केही स्वास्थ्य केन्द्र वर्थिङसेन्टर बन्नु पनि गाउँपालिकाको ठुलो सफलता मान्न सकिन्छ । तर स्थानीयमा जनचेतनाको कमीले मेडिकलहरुमा धाउने र स्वास्थ्य जोखिम पार्ने, अस्पताल तथा स्वास्थकेन्द्रमा अतिआवश्यक स्रोतसाधनको कमी र आवश्यकता अनुसारको अौषधि नहुनु दुखद कुरा हो । यसलाई तुरुन्तै सच्याउन सक्नुपर्छ ।
— वर्षौं पहिलेदेखि पानीको प्रमुख समस्या भोगि रहेको त्रिवेणीका ९ नम्बर र १० नम्बरमा अवस्थित घोर्लेबोट, बरनेटी, टोड्के तीन वटा गाउँमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा राम्रोपक्ष हो । जीवनभर घण्टौ हिडेर पानी बोक्ने ती गाउँहरुमा अहिले पानीको सुबिधा हुनु खुसीको कुरा हो । तर उक्त आयोजनालाई निरन्तरता दिनु मुख्य चुनौती हो ।
— त्रिवेणीको ६ नम्बर वडामा रहेका दवाङ अदुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको तयारी र सोही स्थानमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन हुनु गाउँपालिका उद्योगीक बन्न तिर लागेको संकेत गर्छ । तर ती उद्योगहरुको उपयोगीता र उचित सञ्चालन निरन्तर रहने, त्यसले पालिकालाई कसरी अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्छ र सरकारको लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो ।
— प्रमुख पेशा कृषि रहेको गाउँपालिकाका वासिन्दाको लागि गाउँपालिका भित्र २०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर बन्नुपनि झन राम्रो पक्ष हो । उक्त स्टोरमा पालिका भित्र उत्पादन हुने कृषि बालि तथा फलफूल भण्डारण हुनेभएपछि उत्पादनले उचित मुल्य पाउनुका साथै खेरजान बाट बच्ने भयो । तर यसलाई निरन्तर आर्थिक क्रियाकलापमा जोडेर संरचनाको संरक्षण, प्रबर्द्धन, सञ्चालन गर्न सामान्य सोचले पुग्दैन ।
— त्यस्तै गाउँपालिका भित्र ११ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनु, र मालुवाखोला, बल्लेखोला, वेतुखोला सिचाइ कुलो तथन लसुन खोला लिफ्ट सिचाइ आयोजना हुनुपनि कृषि उत्पादनको लागि राम्रो पक्ष हो । तर ती आयोजनाको प्रभाव, सन्तुलन र सही तरिकाले निर्माण भएभएनन भन्ने तिर ध्यान जान जरुरी छ ।
— यस्तै गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन, दुई ठुला सभाहलहरु निर्माण हुनु, दहबाङ खेलमैदान बनेको पाईएको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुनुहुँदैन ।
— साथै, गाउँपालिकाले सयौं अपांगलाई परिचयपत्र वितरण गरेर भत्तासमेत उपलब्ध गराउदै आएको पाईएको छ, जनता आवास, सुरक्षित आवास अनुसार दर्जनौंले घर र टिनको छाना पाएका छन् । तर आफ्नालाई मात्रै त्यस्तो सुविधा दिएको गुनासो पनि सुनिदै आएको छ । यद्यपि गुनासो अनुसार भएको हो भने सबैभन्दा पहिला आवश्यकता कसलाई छ त्यसलाई गाउँलेनै सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ ।
के गर्न बाँकी छ गाउँपालिका सरकारले ?
— कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि हाटबजार निर्माण गर्न बाँकी छ ।
–स्वास्थ्य सचेतना पुर्ण रुपमा फैलाउने र अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको निति बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा कम आय भएकाले पनि सहज उपचार पाउनेछन् । स्वास्थ्य सचेतनाले गर्दा अनावश्यक अौषधी प्रयोग बन्द हुनेछ र स्वास्थ्य जीवन रहन्छ ।
— पर्यटन र कृषिलाई जोडेर बढीभन्दाबढी पर्यटन पुर्वाधार निर्माण गर्ने । सोच्छ मनोरञ्जन, टुरिष्ट स्टान्डर्ट होटल, होमस्टे सञ्चालनमा प्रेरित गर्ने कार्यक्रम लागु गर्ने ।
— विदेशबाट सीप सिकेर फर्केका युवाहरूको सीपको प्रयोग गर्ने गरी उत्पादन मुलक प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा राम्रो भिजन भएका युवालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने ।
— विद्यालयमा शिक्षकले अनिवार्य विषयत कोर्स पुरा पढाउनुपर्ने पुरानगरे तलब कटौती गरिदिने । बर्षमा अतिरिक्त १ महिना मात्रै ट्युसन पढाउन दिने निती लिनुपर्ने ।
— गरिब तथा उत्कृष्ट बिद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–बांझो खेत र बारीको तिरो (कर) दोब्बर लगाउनुपर्ने ।
–अनुदान भन्दा पनि सहुलियतपर्ण ऋणको पहल गर्ने…..आदी… बाँकी तपाईं थप्नुहोस ।
Previous articleभीमफेदीको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेको पुरानै उम्मेदवार
Next articleइमान सिंलाई राप्तिमा मेयरको टिकट नदिए एमाले हार्नसक्छ ! उनको जित्ने आधार यस्ता !
छलफल गरेर मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने प्रचण्ड-माधव समुहको निर्णय
Himaltimes - March 3, 2021
मलेसियामा शरिर बन्धक बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका डेबिट श्रेष्ठ कारागार चलान
कतारमा नेपालीलाई गाेली हानी दिइयो मृत्युदण्ड
रवीन्द्र मिश्रको पार्टीबाट दर्जन नेताद्वारा पार्टी परित्याग
बिएण्डसीमा कोभिड सङ्क्रमितको उपचारको लागि २०० श्यया सञ्चालनमा